Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! फेरि निर्वाचित भए 'पञ्चकन्याको विकास हेर्न जानुपर्छ' भन्ने वातावरण बनाउँछु : तामाङ
फेरि निर्वाचित भए 'पञ्चकन्याको विकास हेर्न जानुपर्छ' भन्ने वातावरण बनाउँछु : तामाङ
अन्जु डिम्दोङ तामाङ आइतबार, वैशाख १८, २०७९
नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ (रमेश) ले ग्लोबल मिडियासँगको अघिल्लो कुराकानीमा आफू स्थानीय निर्वाचनमा उठ्ने कुरा बताउनु भएको थियो । यतिबेला उहाँ पुनः पञ्चकन्या गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आउने विश्वासका साथ अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचनमा होमिनु भएको छ ।
वितेका पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका विकास र आउने निर्वाचनमा उठाउने विषयवस्तु, नागरिकले पुनः उहाँलाई नै किन भोट दिने र निर्वाचित भएको खण्डमा अबको पाँच वर्षमा पालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ लगायत विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर ग्लोबल मिडियाका लागि अन्जु तामाङले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं –
नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा यहाँको उम्मेदवारी रहेको छ । ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो, त्यो समय घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएका कामहरु कति पुरा गर्नुभयो ?
पाँच वर्षको दौरानमा जनतासँग गरिएको बाचा तथा घोषणा पत्रमा जति कुराहरु लेखिएका थिए, त्यो पुरा भएको छ । कतिपय जनताले पाँच वर्ष अघिको घोषणापत्र अहिले पनि बोकेर हिंडिराख्नु भएको छ । कुन काम पुरा भए, कुन छैनन् ? ती सबै विषयवस्तुको बारेमा जनता सचेत हुनुहुन्छ र अनुमगन गर्ने काम पनि भएका छन् । जनता आफैंले गाउँपालिकामा भएका विकासका कामका बारेमा बहस पनि चलाईराख्नु भएको छ ।
पाँच वर्ष अघि र अहिले पाँच वर्ष पछि पन्चकन्या गाउँपालिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पाँच वर्ष अघि र पाँच वर्ष पछि पञ्चकन्या गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने झण्डै दिन र रातको जस्तै फरक देखिन्छ । पाँच वर्ष अघिका कुरा म आफैंले भन्नु भन्दा पनि गाउँबासी आफैंलाई पनि थाहा छ, आफ्नो गाउँको अवस्था । पञ्चकन्याको हरेक क्षेत्र खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक संजाल लगायतका विषयहरुमा राम्रो विकास भएको छ ।
जनतालाई राम्रोसँग सम्झना छ, छहरेको बजार देखि कहिलेकाहीं आफ्नो सवारी साधनहरु हुनेले पनि छहरेमै राखेर, अझ जुत्ता चप्पल खोलेर गाउँसम्म आउनु पर्ने बाध्यता थियो । अहिले गाउँपालिकाको अवस्था बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनमा रहेको छ । यस गाउँपालिकामा पाँच वर्ष पहिला र अहिले आमूल परिवर्तन भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यहाँको गाउँपालिका देशकै उत्कृष्ट भएको भन्ने कुरा पनि छ, पाँच वर्षको अवधीमा गर्न नसकेका र गर्नु नै पर्ने विषयवस्तुहरु पनि होलान नि ?
केही समय अघि काभ्रेको धुलिखेलमा भएको कार्यक्रममा पञ्यकन्या गाउँपालिकालाई देशैभरीको उत्कृष्ट भएकोमा सम्मान गरेको थियो । यो विषयमा नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ । यो कुराले अझ काम गर्न उर्जा थपेको महसुस गरेको छु ।
गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेको काम भनेको घ्याङश्वाराको सहिद पार्क हो । गर्ने इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि श्रोत साधन अभावको कारणले गर्दा सोचेको जसरी गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको केही बजेट उक्त पार्कमा लगाउने काम पनि भईरहेको छ । त्यो काम अधुरो छ । मेरो मनमा खड्केको कुरा पनि र सपना पनि पर्यटन पार्क निर्माण सम्पन्न गर्ने हो । अन्य कामहरु पनि अधुरा रहेका छन् । काम गर्दै गर्दा पञ्चकन्याको बारेमा मिडियामा पनि सकरात्मक कुराहरु आएका छन् । मिडियाकै कारणले घ्याङश्वारामा आन्तरिक तथा बाह््य पर्यटक आउन थालेका छन् ।
यो पाँच वर्षको बीचमा इच्छा शक्ति हुँदा गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित गरेको छु । यो गाउँपालिकामा देशकै अर्थमन्त्री पद सम्हाल्नु भएका नेता महोदय पनि हुनुहुन्छ तर मैले पाँच वर्षमा के बुझें भने उहाँहरुले गर्न नचाहेकै कारणले पञ्चकन्याको विकास नभएको रहेछ । चाहेको खण्डमा गाउँको विकास हुँदोरहेछ भन्ने मैले पुष्टि गरिदिएको छु ।
आफ्नो गाउँको विकासको लागि म भन्दा पनि राम्रो मान्छे आओस भन्ने मेरो चाहाना थियो । मैले कार्यक्रमहरुमा पनि नदोहोरिने कुरा राख्दै आएको थिएँ । तर राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो कुरा मात्रै गरेर नहुँदो रहेछ । जनताको चाहाना पुनः म नै आउनु पर्छ भन्ने भए पछि एक पटक पञ्यकन्याको विकासको लागि अध्यक्षमा उठेको छु । गाउँवासीको बचनलाई शिरोधर गर्दै नेपालको संविधानले दुई पटकसम्म अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा एक पटक पुनः पाँच वर्षे कार्यकाल थपेर जनताको सेवा गर्ने उदेश्यका साथ निर्वाचनमा होमिएको छु ।
पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित हुनका लागि यहाँका एजेण्डाहरु केके छन् ?
एजेण्डाको कुरा गर्नुपर्दा कतिपय विषयवस्तु पुरा भएका पनि छन् । विकास निर्माणका काम जति भए पनि एक पटक सम्पन्न गरिसके पछि व्यवस्थापनका कुराहरु पनि हुन्छन् । यो कुरालाई पनि निरन्तर्ता दिने, कतिपय सवालमा श्रोत साधनको कमिले गर्दा हामीले चाहेको जसरी गर्न नसकेको पनि हो । म एउटा निर्माण व्यवसायी पनि भएको नाताले गाउँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग थाहा थियो । तर पर्याप्त रुपमा श्रोत साधन नभएको हुँदा सोचेको र चाहेको जसरी काम गर्न सकिराखेको थिएन ।
पाँच वर्षको बिचमा जति काम गर्छु भनेर घोषणा पत्र लिएर ०७४ को निर्वाचनमा गएका थियौं, त्यो काम सबै सकेका छौं । तर पनि काम गर्दै आउने क्रममा धेरैकामहरु मैले देखि राखेको छु । पञ्चकन्या गाउँपालिकाको केन्द्र काठमाडौं देखि झण्डै ४५ मिलोमिटरको दुरीमा पर्छ, गाउँपालिका त २६–२७ किलोमिटरमा नै जोडिन्छ । तर यो गाउँपालिका आउने सडक कालोपत्रे भएका छैनन् । त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आउने सबै वडाका कम्तिमा पनि एउटा सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ, ती कामहरु पनि अधुरै छन् ।
सँगै, एउटा सपनाको प्रोजेक्ट घ्याङश्वारा पर्यटकीय पार्क पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यहाँ खेलकुद मैदानदेखि पार्क निर्माण अधुरो रहेको छ । ०६२-०६३ भन्दा अघि नेपालमा नेकपा माओवादीले चलाएको जनयुद्धको क्रममा पञ्चकन्या गाउँपालिकाबाट १३ जना सहिद हुनुभएको थियो । पार्कभित्र ती सहिदहरुको सालिक निर्माणको कामलाई पनि अगाडी बढाएको छु ।
त्यसपछि भूमेस्थान मन्दिर ६४० मिटरको बाटोको सिंढी निर्माणको कामहरु भईरहेको छ । त्यो काम पनि यो वर्ष सम्पन्न हुन्छ । मन्दिरको दर्शन संगै र भ्यूटावर पनि कल्पना गरेको छु । भ्यूटावरबाट तल खेल मैदानसम्म जीप लाइनको पनि कल्पना गरेको छु । सेमिनार हल, बाल उद्यान, पिकनिक स्पोटलगायत अन्य कामहरु पुरा गर्नका लागि पनि एक पटक पुनः अध्यक्ष उठ्नु पर्छ भन्ने लागेको हो ।
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानबाट स्थानीय तह चल्न सक्दैन, आफ्नै स्रोत साधन खोजेर चलाउनु पर्छ भन्ने दिन आएको खण्डमा चै के गर्न सकिन्छ त, के गरेर गाउँ सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा साेंच पछि गाउँमै एउटा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याएर त्यहाँबाट उठेको केही रकमले गाउँ विकासमा खर्च गर्नु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ मैले त्यो ठाउँलाई बनाउँन खोजिराखेको छु । केही अधुरा कामहरु बाँकि नै छ । यही विषयवस्तुलाई लिएर अगाडी बढ्ने छु ।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा यहाँ निर्वाचित भएको खण्डमा अबको पाँच वर्षमा पञ्चकन्या गाउँपालिकालाई कस्तो रुपमा देख्न पाउँछौं होला ?
गएको पाँच वर्ष सुरुको कार्याकाल भएकोले व्यवस्था पनि नयाँ र हामी पनि नयाँ भएको हुँदा कतिपय कामहरु सिक्दै पढ्दै जस्तै भयो । गर्ने इच्छा चाहाना हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारीले गर्दा नगरि नहुने कामहरु पनि गर्न सकिएन ।
०७४ देखि ७९ सम्मको पञ्चकन्या गाउँपालिका नागरिकले देख्नु भएको छ । मेरो नेतृत्वमा कति काम भए भन्ने कुराको बारेमा नागरिकले गनेरै बस्नु भएको छ ।
म निर्वाचित भएको खण्डमा धेरै त नभनौं, अबको पाँच वर्षमा पञ्चकन्या गाउँपालिका सपनामै होकि भन्ने तरिकाले परिवर्तन गर्ने छु । नागरिकले त्यो महसुस पनि गर्नु हुने छ र त्यो सोंच पनि बनाएको छु । म त्यसै बसेको छैन, भिजन बोकेर नै हिंडेको छु । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा छ, सिंहदरबार कसरी र कस्तो बनाउँने भन्ने कुरा पाँच वर्ष पछि देख्नु हुनेछ ।
विकास हेर्न विदेश जाने जुन चलन छ, म निर्वाचित भएको खण्डमा विकास हेर्न विदेश होईन पञ्चकन्या जानुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउने छु, मेरो त्यो खालको भिजन छ, गरेर पनि देखाउँछु । पक्कै पनि गाउँवासीले विश्वास गर्नु हुनेछ । पुनः पञ्चकन्या गाउँपालिकाको अध्यक्ष मै हुने कुरा यहाँको मिडिया मार्फत घोषणा पनि गर्न चाहान्छु । मैले त्यसै घोषणा गरेको छैन्, गाउँवासीहरु कहिले आउँछ वैशाखको ३० गते ? पुरानै अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङलाई भोट दिनुपर्छ भनेर उहाँहरु आफैं लागिराख्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १८, २०७९, १३:५४:००